Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. इलामकै पुरानो सरकारी विद्यालयमा डिजिटल प्रबिधिवाट पढाई सुरु – Emountain TV
इलाम, २९ भदौ । सरकारी विद्यालय समय अनुसार चल्न नसकेको भन्ने गुनासो बढी रहेका वेला इलामको पुरानो विद्यालय आदर्श मावि भने स्मार्ट स्कुल घोषणा भएको छ । विद्यार्थीको चाहना र समयको माग अनुसार डिजिटल माध्यमबाट अध्यापन सुरु गरेर आदर्श मावि स्मार्ट स्कुल घोषणा भएको हो ।
इलाम सदरमुकाममा रहेको आदर्श माध्यमिक विद्यालयलाई स्मार्ट स्कुलको रुपमा विकास गरिएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै डिजिटल माध्यमवाट शिक्षा प्रदान गर्ने उदेश्यले यस विद्यालयलाई स्मार्ट स्कुल घोषणा गरिएको हो । राणाशासन कालमा नै स्थापना गरिएको यो विद्यालयलाई कम्प्युटरका माध्यमबाट पढाई सुरुगरेसँगै स्मार्ट स्कुलको रुपमा विकास गरिएको छ । केही समयअघि मात्र विद्यालयलाई आधुनिक र डिजिटल मैत्री वनाउने कार्यको सुरुवात भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १-१ वटा यस्ता विद्यालयलाई स्मार्ट स्कुलको रुपमा गुणस्तर उकास्ने कार्यक्रम अनुसार इलामको यस विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाइएको हो । स्मार्ट स्कुलमा गइसकेपछि अब विद्यालयका हरेक कक्षामा चक डस्टरसहित मार्करले लेख्नु पर्ने दिनको अन्त्य भएको छ । यस किसिमको पढाइले नौलो अनुभव सहित पहिला भन्दा अझ सहज भएको विद्यार्थी दिपेश तामाङले बताउनुभयो ।
त्यस्तै विद्यार्थी स्मार्टवोर्ड मार्फत चाहेको कुरा सिक्ने छन् भने अत्याधुनिक सूचना– प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नेछन् । यो विद्यालय सुचना मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको सहयोग प्रविधि मैत्री भएको हो । सूचना मन्त्रालयले ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कम्प्यूटर, स्मार्ट ह्वाइटवोर्ड, प्रोजेक्टर, साउण्ड सिस्टम, नेटवर्क क्यामेरालगायत २० प्रकारका सामग्री सहयोग गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारवाट करिव २० लाख रुपैयाँ बराबरका कम्प्युटर, सिसी क्यामेरा, एलइडी टिभीलगायतका सामग्री प्रदान गरिएको छ । उपलब्धी मुलक कार्यक्रम भएपनि चुनौती समेत थपिएको बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कोमल निरौलाले बताउनुभयो । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने चिन्ता समेत वढेको उहाँले बताउनुभयो ।
बिद्यालयका प्रधानाध्यापक कुमार पौलेलले स्मार्ट विद्यालय घोषणाले विद्यार्थीहरुलाई अझ दक्ष बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुुभयो । तर विद्युत र इन्टरनेटको नियमित उपलब्धताले भने चुनौती थपिएको उहाँको भनाई छ ।
यस किसिमको पढाइले गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पनि प्राविधिक विषय अध्यापनका लागि सहज भएको छ । १ देखि १२ कक्षासम्म सञ्चालित यो विद्यालयमा १ हजार ७ सय ६१ जना विद्यार्थी छन् । अङ्ग्रेजी माध्यममा समेत पठनपाठन सुरु गरेको यो विद्यालयमा सूचना प्रविधिको उपयोगले विद्यार्थीको चाप थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सीमा क्षेत्रका वासिन्दा पुस्तौंपुस्तादेखि पीडामा
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि उल्लासमय रुपमा उम्मेदवारी दर्ता
अतिक्रमणको चपेटामा ‘टुँडिखेल’
दार्चुलाका स्थानीयमा थप अतिक्रमणको त्रास
बाजुराबाट १० लाख रुपैँया बराबरको आलु निर्यात
प्रधानमन्त्रीको नगरमा २५ तले भ्यू टावर, आलमको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको परेड
कालापानीमा चाहिएको कूटनीतिक अग्रसरता, राष्ट्रवादको परीक्षा